Ungawafihla kanjani amafayela ku-Linux (ngale kokusebenzisa isikhathi kumagama) | Kusuka kuLinux
Kimi Ngokwami okuthunyelwe kwangaphambilini kokuthi ungayisebenzisa kanjani ikhodi Bash Percaff_TI99 Ungicele ukuthi ngenze enye indatshana kepha ngikhuluma ngokufihla ifayili elilodwa ngaphakathi kwelinye, ikakhulukazi ngifihla ifayela ngaphakathi kwesithombe:
Sasingabasebenzisi beWindows kanye futhi ngesinye isikhathi sazama ukufihla okuthile esasingafuni ukuthi omunye umuntu akubone. Kulokhu sisebenzisa ama-softwares ahlukahlukene, amanye afana ne-HideFoldersXP, LockFolder, njll.
Manje njengoba sisebenzisa iLinux sifuna ukwenza okufanayo, ngeshwa ukufihla kanjalo akusikho ukuthi kunezinhlelo zokusebenza eziningi. Kungasetshenziswa izimvume ezifanele ukuvimbela abanye ekufinyeleleni kufolda ethile, noma bamane babethele lokho esifuna ukukuvikela, enye into eyaziwa kahle yile: «qamba kabusha ifolda noma ifayela bese ubeka inkathi (.) ekuqaleni, lokhu kuzokwenza ukuthi ifihlwe«. Kepha lokho kufana neWindows kwe- «chofoza kwesokudla kufolda, hlola inketho yefolda efihliwe“… Akukhona lokho esikufunayo ngempela.
Lapha bazofunda ukuthi bangafihla kanjani ifayela elilodwa noma amaningi ku-GNU / Linux, ngaphandle kokufaka izinhlelo eziyinkimbinkimbi (azikho ngempela), ngaphandle kokubethela noma yini, njll.
Umphumela uzoba, isithombe esingenabungozi esizoqukatha ngaphakathi kwaso, ifayela le-RAR eline-password (noma nje noma yiliphi ifayela elicindezelwe, i-tar.gz njll). Icebo ukuthi lapho sichofoza kabili esithombeni esingenabungozi, sizokhonjiswa sona kahle kepha, ukuze sikwazi ukubona okuqukethwe okufihlekile ngaphakathi kwaso, kufanele sisivule leso sithombe esingenabungozi neMenenja yefayela (File-Roller, Ark , njll), faka iphasiwedi esiyibeka kufayela le-RAR, futhi yingakho sikwazi ukubona okuqukethwe. Kungabukeka kuyindida kepha, kuyindaba yemiyalo emibili, nansi ingaphezulu kokuchazwa nemininingwane nemifanekiso emihle ...
Ake sithi sifuna ukufihla isithombe, ake sithi lokhu:
1. Into yokuqala okufanele siyenze ukudala ifolda, sizoyibiza «Imfihlo«. Ngaphakathi kwaleyo folda sibeka leso sithombe, kanye nawo wonke amanye amafayela esifuna ukuwafihla. Kulesi sibonelo sizofihla leso sithombe kuphela, kepha kungaba ngamafayela amaningi (izithombe, imibhalo, njll.) Njengoba sifuna.
2. Manje sicindezela leyo folda (secret) ngomyalo olandelayo:
Incazelo yalolo layini imi kanjena:
rar - »Cindezela ngefomethi yeRAR
a - »Faka noma engeza
secret.rar - »Igama lefayela leRAR esizoba nalo njengomphumela
-hp - »Ikhombisa ukuthi leli fayela leRAR lizoba nephasiwedi noma iphasiwedi
Lapho sibeka lowo myalo, izosicela iphasiwedi yefayela le-RAR (imfihlo), silibeka kabili futhi lizokwakha ifayili elicindezelwe nephasiwedi, ngikukhombisa isithombe-skrini ukucacisa ukungabaza:
3. Silungile, sesivele sinalo ifayela imfihlo evikelwe nge-password, manje kufanele sibheke isithombe esingenabungozi esingakhulumi izinsolo, esinjengalesi:
4. Manje sizobeka nje ifayela imfihlo ngaphakathi kwesithombeUKrisimesiTux2008.png) ngomyalo, kanjena:
5. Lokhu okuzokwenza ukudala isithombe esisha (isithombe_ sohlu.png) ukuthi uma bevula, isithombe sikhonjiswa ngokuphelele, kepha uma beguqula isandiso (isithombe_ sohlu.png a isithombe_ sohlu) uzosicela iphasiwedi esiyibekile (ngifakile kusuka ku-linux iphasiwedi) futhi siyabona isithombe sentombazane.
Nayi ifayili le- isithombe_ sohlu.png mine ukubheka ukuthi konke kusebenza kanjani:
Futhi-ke, akukho okunye okuningi ongangeza ngokuthi ungafihla kanjani
Ngiyaphinda ngithi, uma ufuna ukubona okuqukethwe okufihliwe ngaphakathi kwesithombe, mane uguqule ukunwetshwa kwesithombe (kusuka ku-. ) futhi kwenziwe, okunye kulula.
Amanothi wokugcina kanye nokucaciswa:
Bangakopishela isithombe kubangani babo ngamafayela afihliwe ngaphandle kwenkinga, sizosebenza kahle nakwiLinux, Windows noma Mac.
Kwesinye isikhathi lobu buqili abusebenzi nanoma yisiphi isithombe, kwenzeke kimi ukuthi kwesinye isikhathi ngifihla ifayili elithile ngaphakathi kwesithombe futhi lapho ngiguqula isandiso sesithombe sibe yi-.RAR bese ngiyivula, ivele ingikhombise konke okumhlophe. Uma lokhu kwenzeka kuwe, shintsha isithombe 'esingenacala' sesinye size sikusebenzele.
Akudingekile ngokuqinile ukufaka iphasiwedi kufayela le-.RAR, kepha kunconywa kakhulu ngoba kuyizinga elengeziwe lokuphepha elamukelwa kahle njalo 🙂
Akudingeki ukuthi ibe nesithombe se-PNG, isebenza ngokufana ne-JPG.
Ngiyethemba ukuthole kuthakazelisa, njengoba kukhona uhlelo lokusebenza olungasisiza ukufeza lokhu, okungukuthi, sigwema ukusebenzisa umyalo: SilentEye: Fihla ifayela elilodwa ngaphakathi kwelinye
Kodwa-ke, ngokwami ​​ngincamela ukusebenzisa umyalo engikukhombise wona ngenhla, ake sithi ukufaka isoftware (ngokuncika kwayo) ukufeza okuthile engingakufeza ngomyalo olula (ikati) angikuboni kudingekile impela 😉
Noma kunjalo, manje akusekho okunye okuningi ongakungeza, noma yikuphi ukungabaza noma umbuzo ungazise.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungawafihla kanjani amafayela ku-Linux (ngale kokusebenzisa isikhathi kumagama)
Iyiphi indlela yokwenza okufanayo ngamavidiyo? 🙂
Angikaze ngizame amavidiyo ngamavidiyo, kuzofanele ngizame kepha ... angicabangi ukuthi kusebenza lokho kulula 🙁
Yisebenzisele izinhloso ezinhle noma ezimbi? - Hehehe
Ukukhuluma ngoMphongolo, ukubona lapho "beguqula" noma befaka esikhundleni sakhe ngqo.
I-athikili enhle, kepha i-rar iyifomethi yokuphathelene, kungani bengasikiseli ithuluzi lamahhala elifana ne-7z abathi lingcono kune-rar?
Ithiphu enhle. Ngijoyina, yebo, kulokho okwashiwo yi-lawliet, ngokuba yi-7z ifomethi yamahhala nenhle.
I-7z yifomethi yokuminyanisa engcono engake ngazama. Ngabe leyo ndlela izosebenza kuma-tarball acindezelwe ku-GZip noma ku-BZip2?
Isithombe onaso ngemuva ku-terminal yakho silimaza amehlo.
lokhu kuyathakazelisa, njenge-steghide.
Yeka ukufihla i-pr0n ... xD
Umfana oyisidina kusho
Phendula kumuntu oyisidina
Uvalo lweKernel! kusho
Kuhle kanjani! kepha ku-archlinux ayikho i-rar (uma ikhona kodwa angifuni ukuyifaka kusuka ku-yaourt) kungenzeka nge-zip? Ngiyabonga, ngumbhalo omuhle kakhulu.
Phendula ukwethuka kweKernel!
njengoba kusho ku-athikili ...
(noma nje noma yiliphi ifayela elicindezelwe, i-tar.gz njll).
Uxolo, kukhona okuphazamise ukunaka kwami ​​kuleyo ngxenye yokufunda futhi ngakweqa; Ngiyabonga ngokungitshela.
: Noma kuthakazelisa kakhulu, ngiyabonga ngobuqili 😉
Ithiphu enhle kaBuahhh, elula futhi ephathekayo yokufihla izinto ngesithombe "esingenacala" lol.
UNano, ngalokho ... kungaba nzima ukufihla i-porn0, ngoba ... cabanga ifolda ye ... 1 GB ye-porn0, uyifaka esithombeni ngekati ... bese ucabanga ukuthi "isithombe" besingathini Isisindo, umuntu onamandla noma omncane angabona Kukhona okuxakayo, manje, uma kufihlwa isithombe, amadokhumenti noma izinto ezincane, kepha ngasikhathi sinye kubaluleke kakhulu, kuhle.
Ithiphu elinobuhlakani, futhi elilusizo ukufihla imininingwane ebucayi noma ukuthi asifuni nje ukuba seduze kwalabo abangafika bethwetshulwe yikhompyutha, ngaphandle kokungabaza ngenkathi isithombe singaba yi-10Mb noma ngaphezulu kancane nefayela likhudlwana kuno-20 Mb osesithombeni kungasolisa, kepha mhlawumbe kuvidiyo kungenziwa, sizobona ukuthi kungenzeka kanjani. Okwamanje lokhu kuyasiza impela.
I-KZKG enhle kakhulu ^ Gaara, ngiyabonga ngethiphu.
Ngiyabonga kakhulu i-KZKG ^ Gaara ngalokhu okuthunyelwe, ngifuna imininingwane yokuthi kungenzeka yini ngamavidiyo, ngithola ku-wikipedia ukuthi ukusetshenziswa kwale ndlela ibizwa nge-steganography futhi isetshenziswe iminyaka engama-400 ngaphambi kukaKristu, ngokusho kwe-USA namuhla, i-FIA nemilayezo ye-steganographic evela ku-Bin Laden itholwe yi-CIA, iphinde yasetshenziswa ku-WWII. Kubukeka sengathi isetshenziselwa kabanzi izinhloso ezinhle nezinobungozi. Amafayela alalelwayo, amavidiyo, izithombe, izivumelwano zokuxhumana ze-TCP, njll. Zingasetshenziswa njengesithwali (isb. Isitsha). Nginentshisekelo ikakhulukazi entweni elula efana ne-KZKG ^ Gaara ngaphandle kokufaka amaphakheji. Manje sizovula ukuthi singakanani isithombe esisakazwa kule bhulogi ukubona ukuthi sifihla okuthile kwe-xDD.
Yeka idatha enhle. Kubi ngithola leli phutha kuwo wonke amafayela engizama ukuwafaka: »Kuvele iphutha ngenkathi kungezwa amafayela kungobo yomlando.»
Omunye uzokwazi ukuthi kungani lokhu kwenzeka kimi?
Kuhle kakhulu !! Kube umnikelo omkhulu….
Lezi zindlela zibizwa nge- «Steganography», futhi uma unesithakazelo esihlokweni, ngincoma ibhulogi ye-eobits.org lapho kunolwazi oluningi, amasu ngisho nokuzivocavoca umzimba. Angihlangani ngalutho naleyo webhusayithi, kepha ngiyayincoma. Futhi uma beyithanda kakhulu bazoxhunywa.
Lokho okwenze lapho concatenate (cat) womabili amafayela bese ugcine umphumela kokusha. Ingenye yezindlela eziyisisekelo kakhulu ze-steganography.
Enye inketho engasetshenziselwa ukubethela nge-password isebenzisa i- "aescrypt", okufana nokuvalwa kwefolda noma okufanayo.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasiza, maqondana
Kuhle kanjani! Bengivele ngikwenza nge-7zip!
Nakhu uma kwenzeka noma ngubani enentshisekelo (ngizosebenzisa isibonelo esivela kokuthunyelwe):
7z ukuyimfihlo engu-7z eyimfihlo -p
Bafaka iphasiwedi bese: ikati ChristmasTux2008.png secret.7z> foto_lista.png
Ngiyabonga futhi, ngizoyisebenzisa kahle!
Okuqukethwe kokuthunyelwe akubalulekile, ukusho okuncane. Okubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi intombazane iyi-xD
Ngaphandle kwalokho, ngincamela indlela "yendabuko" yokushintsha amagama wamafayela nezandiso ukuwenza angabi nalusizo kulabo abafuna ukwazi, ukuze ifayela elithi "threesome.jpg" libe "linear algebra exercises.odt".
Kepha labo abazi kancane, besebenzisa umyalo "wefayela", thola ukuthi iyi-jpg hhayi eyinqaba. Futhi labo abazi okungaphezulu, imvamisa bafunda amafayela nabahleli be-hexadecimal futhi kubo ungabona ukuthi i-jpg iqala ngokunembile nge- "JPEG"
Kuhle kakhulu, ngokulandela ulayini ofanayo ungaphawula kumgcini we-crypt ukubethela amafolda.
Lapha elav wenza okuthunyelwe kwe-cryptkeeper
Bengikade ngenza lokhu nje kuWindows ngohlelo, kujabula kanjani ukuphinde ngilibone kuLinux 😀 Futhi uma ufuna ukwazi: cha, asikwazi ukugcina ividiyo kusithombe 😛 Kuzofanele ukuthi ufihle i-pr0n kangcono.
Uma bengingagcina amavidiyo ama-2 esithombeni, ukuphela kwento »isithombe» esinesisindo esingu-40mb, uma umuntu ebukeka eqinisekile ukuthi angasola. 🙂
Ngizamile ukusindisa i-mp4 ne-mplayer yangitshela ukuthi ngeke iyidlale: <Akulungile ...
i-athikili enhle kakhulu yokuvikela imininingwane 😀
Ngithanda isitayela se-cryptkeeper kangcono ukuthi ngibe nanoma yini eyimfihlo 🙂
Iwusizo kakhulu! Ngibonga kakhulu!
Kuhle kakhulu, futhi uma sengikwenzile konke lokhu eLinux.Kubonakala kanjani kwiWindows, ngingayivula yini neWinRAR?
Yebo, ngokwamanothi ekugcineni, ithi iyasebenza, futhi ngenxa yokuthi i-rar iyifomethi esetshenziswa yi-winrar asaai, akufanele kube nezinkinga
Kuhle kakhulu, yize kufanele kubhekwe isisindo esisha sefayela, isithombe esincane esithatha isikhala esiningi singasolisa 😉
Isu elihle kakhulu. Angikaze ngikubone. Siyabonga ngokufaka.
Lihle kakhulu yize lisenziwa kungenzeka lingavikeleki kangako, ngenxa yosayizi wefayela noma ukususwa ngephutha kwefayela.
Bengingazi ukuthi umyalo "wekati" ungakwenza lokho. Inani lemiyalo engajwayelekile okufanele ikhohlwe laphaya futhi yenze izinto ezingacabangeki, noma yenze imisebenzi ngendlela elula noma esheshayo kunezinye izindlela esizijwayele.
UJose Perez kusho
Kumele ngabe ngenza okuthile okungalungile, kepha ubuqili abungisebenzeli.
Ngizamile ngezithombe ezihlukile ze-jpg nangamafayela ahlukene wokufihla, futhi angiphumelelanga.
Ngikhathele ukwehluleka okungaka, ngisebenzise izithombe ozinikeza kulokhu okuthunyelwe, futhi ngomphumela ofanayo okhungathekisayo, ngaphandle kwesimo sefayela lakho le-foto_lista.png, elingivumele ukuthi ngithole isithombe sentombazane.
Ukuphela kwento engiphunyukayo ukuthi i-rar eyokuhlaziywa, kepha ngiyaqonda ukuthi akufanele ikuthinte.
Ngokunikezwa impumelelo elinganiselwe, angizange ngibe nesibindi nge-7z. Njengokwethuka kweKernel! impumelelo
Phendula uJosé Pérez
Ingabe uthayipha imiyalo kahle? Uma kunjalo, ngidlulise izixhumanisi zalokho ofuna ukukufihla nesithombe ofuna ukukufihla kuso ukuze ungivivinye ngikutshele.
Empeleni uma kungukuthi .rar noma .7z noma okuthile okunjalo akubalulekile kangako 🙂
kuhle kakhulu, bengazi ukuthi kulula kakhulu futhi kusuka kubash uqobo!
Ngiyayithanda le bhulogi, iyakhombisa kakhulu, ngifunda okuningi ngokuzifunda.
Ngithanda ukuhlaziywa abakwenzayo kwezindaba, futhi ukuhlaziywa kwezobuchwepheshe kuhle, kungcono kakhulu kunamanye ama-Free Software blogs engiwabonile.
Ngiyabonga ngokuba khona kwakho nokuba njengoba unjalo kuze kube manje.
Qhubeka nomsebenzi omuhle, uthuthuke njalo, uziphelelise njalo.
Ngifisa sengathi amanye amabhulogi nezindawo zezindaba zifana nawe,
Ukugona! = D
FR @ NK kusho
Indatshana enhle kakhulu…
Phendula ku-FR @ NK
ungayenza kanjani ku-openuse 13.1